အတိုက်အခံဟာ အစိုးရလောင်းမဟုတ်သေးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အတိုက်အခံဟာ အစိုးရလောင်းမဟုတ်သေးပါ
Posted by phone_kyaw on Jun 29, 2012 in Copy/Paste | 24 comments
ကိုဘုန်းကျော်ပြောတဲ့ ခရစ်ယန်ဝန်ကြီးဌာန။ မွတ်စလင်ဝန်ကြီးဌာန တိုဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘေလာကျမိသဗျာ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရြ့အစိုးရဌာနများပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စမှာ ပထမဆုံး get out လုပ်သင့်တဲ့ ၀န်ကြီးဌာနကတော့ သာဿနာရေးဝန်ကြီးဌာန လို့ပြောရင် အတော်များများက ကျွန်တော့ကိုဆဲ့ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရေးပြောင်းလဲမှုမှာ အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေက နံမယ်ပျက်စရာပါ။
ကိုယ့်အမြင်နဲ. ကိုယ်ပါဘဲ၊ အမြင် မတူတဲ့လူတွေ တိုက်ခိုက်လာရင် အပြစ်မဆိုကြေး
ရေရေလည်လည် ထိထိမိမိ ကို တွယ်ထားတာပဲ..
အမှန်လည်း အမှန်တွေချည်းမို့ …
ဒုတိယလက်မဟာ ကျုပ်လက်မ ဖြစ်ပါကြောင်းးး
ကောင်းတယ်ကိုဘုန်းကျော်။ ဟိုဝန်ကြီးဌာန ဒီဝန်ကြီးဌာန နဲ့ ရေသာများ ငါးမရှိဖြစ်နေတယ်။ ရထားဝန်ကြီး လဲရှိ နောက်ပြီး ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီလဲရှိ။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနထဲ ထဲ့လိုက်ပါလား။ သာသနာရေးကိုလဲ ဘုန်းကြီးတွေလက်ထဲထဲ့လိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဘုန်းကြီးအလုပ် ဘုန်းကြီးတွေလုပ်ပလေ့စေပေါ့။
အမေစု ၀တ်တာစားတာလေးတော့ မပြောပါနဲ့ ကဘုန်းကျော်ရယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့လဲမနှိုင်းပါနဲ့။ ကျားနဲ့မ သဘာဝချင်းမှမတူတာဗျာ နော့။ သူ့ခမျာ ခုမှလှလှပပလေး ၀တ်စားပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာရတာ ပါ။ စာနာပေးပါဗျာ။
သိသလောက် အဲ့ဒီ ၀န်ကြီးဌာနက ဘာကို ကိုင်တွယ်သလဲ ဆိုတော့ ရထားလတ်မှတ် ဖြတ်တဲ့အခါ သုံးတဲ့စာရွက်တွေကို ရိုက်ထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို သူက ပေးတာလေ။ အသိထဲမှာ အစိုးရ သုံး ရုံးသုံး ကျောင်းသုံး စာအုပ်တွေ လတ်မှတ်တွေ ကို ပုံနှိပ်ပြီး ချမ်းသာတဲ့သူကတော့ အဲ့ဒီ ၀န်ကြီးဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ အတော် အလုပ်လုပ်ရတာကလား။
သူတို့ လုပ်ငန်းက အဲ့ဒီ ၀န်ကြီးဌာနာကပေးတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့တင် ချမ်းသာတာ။
ဒါကြောင့် ၀န်ကြီးဌာနတွေ အလုပ်မလုပ်ဖူး ပြောရင် စိတ်ဆိုးကုန်လိမ့်မယ်။
အမေစု နဲ့ အန်အယ်ဒီ ခွဲမရတာ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာ။ ပါတီထဲ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ ပညာတတ်စစ်စစ်တွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ် ထင်လို့လဲ။
နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ တကယ့်ပညာတတ်အကြံပေး
ခန့်အပ်နိုင်တဲ့သူရော မြင်မိလို့လား ??????
အားလုံးထောင်ထဲကနေ ဒုက္ခခံ အဖိနှိပ်ခံပြီး ခုမှ အပြင်လေရှုဖို့ ထွက်လာတဲ့သူတွေ။
ရေမြေခြားမှာ ရောက်နေ လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား ပညာတတ်ဆိုသူတွေကရော တကယ် အနစ်နာခံပြီး ကိုယ့်မြေကိုယ်ြပန်လာပြီး ပါတီထဲဝင် လိုအပ်ရာ မှာ ၊ ကျရာနေရာမှာ အေးတူပူမျှတာဝန်တွေ တပိုင် တနိုင်မျှယူမဲ့သူတွေရော ရှိလို့လား??????
အဲ့ဒီလို စံထားလောက်စရာ ပြည်တော်ပြန်တွေ ခုထိမတွေ့မိသေးပါဘူး။ ဆရာကြီး ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကို လေးစားတာ ဒါတွေကြောင့်။ ခြုံကြည့်လိုက်တော့ တဘို့ထဲ သမားတွေပါ။ အတူတူနဲ့ အနူနူကို ဘိန်းစားခြင်း တလုံးပိုရှူချင်နေတယ်။
အမှန်က ခြေပြန်ချရင် ဖုန်ခမှာကြောက်နေတာများ။ သံကောင်းဟစ်နေတယ်။
လုပ်ပါလိမ့်မယ် ကီးဘုတ်ပေါ်ကနေ နိုင်ငံရေး ။ ငတုံးတွေ ငအတွေ ဒါတောင် မသိရကောင်းလားဆိုတဲ့ ဆရာကြီးလေသံတွေနဲ့။ တကယ် စေတနာရှ်ိရင် ပြန် လာ ခဲ့ကြ။ လေထဲကနေ အော်မနေနဲ့။
မြန်မာတွေရဲ့ ဘေးထိုင်ဘုပြောတတ်တဲ့ sကျင့်က ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် မပြောင်းဘူး။
ဒါကြောင့် ဟိုမိုးပြာမွတ်ဆလင်ဟောင်းက ပြောတာ။ စနစ်ကြောင့် မဟုတ်ဖူး ဆိုတာ။
ဟိုနေ့က ဒေါင်းလိုပဲ ရှေ့က လှပါရဲ့ နောက်က ဟောင်းလောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ငုံကြည့်ကြအုန်း။
ခွီးတဲ့ မှပဲ ။
ကဘုန်းကျော် ရှင်လည်း ဒီပြန်လာရင် သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီး ရာထူးလောက်တော့ ရလိမ့်မယ် ။ ဒီက ၀န်ကြီးတွေက ရှင့်ဦးနှောက်လောက်တောင် ကောင်းတာမဟုတ်ဖူး။
အဲ့ဒီ ရှင်ပြောတဲ့ အန်ဂျီအို ဖွတ်ကျားတွေအကြောင်း ကြုံရင် ထပ်ဖွအုန်းမယ်။
နောက်တခုက ဘကြီးစိန်ရဲ့ မွေးဇာတိအိမ်က သိန်း ၂၀ တောင် မတန်တဲ့ ၀ါးကပ်ထရံကာ။
ဘယ့်နှယ့် ကျုပ်ဒေါင်း ကို ဆွဲစိ ရတာတုန်း ….
ဒေါင်းမလဲ … ကပြန်တော့လည်း အ၀ှာပေါ် လို့ တဲ့….
မ က ပြန်တော့လည်း ၆၃မကျတဲ့ ဒေါင်း တဲ့ …
တကယ်တော့ အမြီးမိုးပေါ်ထောင်တဲ့ အကောင်မှန်သမျှ
(ဒေါင်း ကြက် ငုံး.. အစ … ခွေးတွေကြောင်တွေအဆုံး)
အမြီး ထောင်ရင် အကုန် အဟွာပေါ်တာချည်းပဲ..
ဘယ့်နှယ့် ဒေါင်းကျမှ ကံကွက်ကြားမိုးရွာတယ် …က.လည်း က.ပြရသေးတယ်..
စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အေ။ လောလောနဲ့ မျက်စိရှေ့တွေ့တာ ဥပမာပေးမိတာပါ။ ကွက်ကြားမိုးမဟုတ်ရပါအေ။ စိတ်ထိခယက်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်။
အမေစုကို စေတနာနဲ့မကောင်းပြောရင်တောင် ချိနေအောင်နာတယ်။ တို့တွေ ကောင်းစားဖို့ လုပ်ပေးနေတဲ့ တို့အမေ။
ပြန်လာရင် မုန့် ဝယ်ကျွေးမှာလား။
ပန်းကုံးစွပ်ကြိုပြီး ကေတီဗွီမာဆတ်ပို့ပေးအုန်းမှာ ။ နောက်ထန်းတောထဲက ထန်းရေတွေလည်း အ၀တိုက်မှာ။
ကြည့်ပါ့လား စကားထဲက ဇာတိပြ။ အနစ်နာခံမယ် မရှိဘူး။
ဒါကြောင့်ပြောတာ ဘိန်းစားခြင်း တလုံးပိုမရှူနဲ့လို့။
စကားမစပ် ၄ ခုမြောက်လက်မက ကျမပေးတာ။ ဟွန်း..
လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်တဲ့ ဇေယျာသော်လိုလူမျိူးတွေကလည်း အနောက်ကနေ ထမိန်ထုတ်လိုက်ပြီးထမ်းရတယ်။
လူငယ်တွေကို နေရာပေးချင်လို့၊ အတွေ့အကြုံရအောင်လို့၊ ဒေါ်စုကခေါ်သွားတာဖြစ်မှာပါ။ နဲနဲတော့ ရိုင်းပြီး အဲဒီလိုမပြောသင့်ပါဘူး။
ဝံဂျီးဒွေအကြောင်းပြောတော့ ဟုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ အဖွားဂျီး ဝတ်စုံငါးဆယ်လောက်ရှိဒါ
ဟိုဘဝတုန်းက ကဇော်သောက်တဲ့လူက ခုမှ ဝိုင်တွေဘာတွေသောက် မော်တော်ကားတွေဘာတွေနဲ့
( အခုတော့ နယ်စပ်က အဖွဲ့ တွေ မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ ရင်ခုန်နေကြပြီ။ )
အခုတော့ နယ်စပ်က အဖွဲ့ တွေ မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ ရင်ခုန်နေကြပြီ။ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ
အကြံဖန်လုပ်ပြီးခေါ်ထားတဲ့ သူတို့စောက်မျိုးတွေ ကလည်း သိန်းနဲ့ချီဒယ်လို့ ပြည့်စုံအောင်ရေး
ဒေါ်စုက..သူ့ပါဝါနဲ့.. မြန်မာအ၀တ်အစား.. ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ကြော်ငြာပေးလိုက်တာ…
ယူအက်စ်..အယ်လ်အေမှာတော့.. ထမိန်ဆင်တွေ.. ကိုက်ထောင်ချီထုတ်နေပြီ..
အင်္ဂလန်မှာ.. ဘိုမက..မြန်မာအကျီထမိန်ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ထုတ်ရောင်းနေတာတဲ့..
သယံဇာတတွေရောင်းပြီး.. နိုင်ငံခြားက.. အပ်ကနေ.. လေယဉ်ပျံအထိ.. ၀ယ်သုံးမယ်..
ဟန်ဒွက် ယန်းဂ် ဘာမန် အရူးပြန်ထနေလို့
ဟန်ဒွက် ဖက်ရှင် ဒို့ကြီးမေ ဆိုပြီး
အနှီ ဖက်ရှင်တွေ အတိုင်း ချုပ်.. (သံတူကြောင်းကွဲလေးတွေ လည်းထည့်)
သဂျီးမင်းရေ…. အဲ့ဒီဖက်ချင်ဒွေမနှစ်ကတည်းဂ (တိတိကျကျ) သူလွတ်ဂဒဲဂပေါ့ မန်မာမှာတခေတ်စားပီးသွားပါဘီဗျာ…
ဘိုဂဒေါ်ဒွေဒေါင် တန်ဖိုးကြီးဇာနဲ့ ပိုးဖဲဂဒီဘာတွေစွန့် ခုဒေါ့ အားလုံးချိတ်နဲ့ ဒေါ်စုဒီဇိုင်းရယ်လို့ …တခေတ်ထပီးဂျောင်းပါဖျာ့…..
တောက်(စ်) – (မူရင်း – ဂဂ)
အဓိက အပိုင်း က ကိုယ်ဝင်ရွှီးလို့ မရတော့
ကိုယ်သန်ရာ ပြောမလို့ ဟာ သူကြီး ဦးတွားတယ်။ ;-)
မြန်မာ အဝတ်အစား ဘယ်လောက် လှကြောင်း ကို ကမ္ဘာသိအောင် ပြတာပါ ကဘုန်းကျော်ရယ်။
ပိုပြီး ဟန်ကျ သွားတာ တစ်ခု က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ခန္တာ ကိုယ် သေးသေးသွယ်သွယ်လေး မို့ သူ ဝတ် ပြတဲ့ ဒီဇိုင်းတိုင်းက တင့်တင့်တယ်တယ် နဲ့ ပိုပြီး လှပ နေတာ။
လန်ဒန်မှာ နိုင်ငံခြားသူတွေ မြန်မာဝတ်စုံ တွေဝတ်ပြီး ရှိုး လုပ်တာ ကြားဘူးတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တော့ လုံးဝ မမှီပါဘူး။
ကဘုန်းကျော် – ရှင့် မိန်းမ လေး ကလဲ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေး။
မြန်မာဝတ်စုံ နဲ့ အတော် လိုက်မဲ့ ပုံဘဲ။
ရှင် နဲ့ လိုက်မလိုက်တော့ မသိ။
ဒါ က ဘက်လိုက်ပြောတာ။
နောက်တာ – စိတ်ထိခိုက်တွားနဲ့ဦး။
အမလေး မမခင်လတ်ရယ်။ စိတ်ထိခိုက်နေအုံးမယ်။
ဇေ ယျာသော် က ကြီးမေ ထမိန် ထုပ်ထမ်းးး နင် က ချီးထုပ် ကြီးထမ်းပြီ…. ချီးတွင်းထဲ ခုန် ချလိုက် နော်…
ဘိုးတော်ကြီး…. ဘော် ကျုံး….. ခင်လို့ ငယ်ချင်း အချင်းချင်းစတာနော်
ကိုဘုန်းကျော် .. အတော် တိုးတက်လာပြီ …. ။
ဒီလိုဆိုတော့လည်း ဘယ်ဆိုးလို့လဲ … ထိထိမိမိနဲ့ အကွက်ကျကျရေးတတ်ရဲ့သားနဲ့ ….. အရင်အချိန်တွေ နှမျောစရာဟယ် .. ပေါက်ပန်းလေးဆယ်တွေရေးပြီး … နာမည်ဆိုးနဲ့ လူသိအောင်လုပ်ခဲ့သေးတယ် … ။
ဘယာကြော်ပါဗျို့ .. လက်မပိစိလေးထောင်သွားပါတယ် … ။
ကိုဖုန်းကျော်ရေ ဖြစ်စဉ်ကိုက်တွေကို အပီရေးလိုက်တာနော်။
မြန်မာထေရ၀ါဒတရားတွေဟာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ တရားတော်အစစ်တွေလို လူတွေအတွက် အသုံးတည့်မယ်၊ အားကိုးရာဖြစ်မယ်။
လမ်းညွှန်မယ့် ဘုန်းကြီးတွေကလည်း လူတွေ ဘ၀မှာ အသုံးတည့်အောင် လမ်းညွှန်နိုင်မယ်ဆိုရင်
ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြားတွေကတောင်မှ ဒီတရားတွေကို ယူသုံးလာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လူမျိုးခြား၊ ဘယ်ဘာသာခြား လွှမ်းမိုးမှာကို ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။
အခုက ကိုယ့်ကျင့်သုံးနေတဲ့ တရားတွေကို လူတွေ အသုံးတည့်အောင် ပြန်စိစစ် ဝေဖန်ဖို့ထက်
လူတွေကို အတင်းအဓမ္မ အစိုးရအားကိုနဲ့ ကိုးကွယ်ခိုင်းနေရတဲ့ အဖြစ်ဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေရဲ့ ဂုဏ်ရည်ကိုပါ ထိခိုက်ပါတယ်။
ဘုန်ကြီးတွေ သူတို့ ဓမ္မအရည်အချင်းနဲ့ သူတို့ ရပ်တည်ကြပါစေ။
လူအစိုးရအာဏာနဲ့ပေါင်းလိုက်မှ သာသနာပါ အဆင့်နိမ့်လာရသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဆက်ပြီး လေ့လာစေချင်တဲ့ ပိုစ့်လေးက
“ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ဖျက်သိမ်းပစ်ရမယ့် မဟန နဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန” http://www.maukkha.org/index.php/feature-article/1664-maukkha-monks ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးကို ထပ်ညွှန်လိုက်ပါတယ်။
ဘာကောင်လဲကွ.. အစိုးရလဲ မကောင်းပြောတယ်၊ ဒေါ်စုကိုလဲရစရာမရှိဘူး ပြောသွားလိုက်တာ။ မင်းဘာကောင်လဲ။ မောင်ရင့် လက်ချောင်းတွေကိုကြည့်ပြီး မညီတာကိုသာ ညီအောင်ဖြတ်လိုက်တော့။
နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုလား အဲဝံကြီးဆို ဂေါက်ကွင်းနဲ့အိမ် ကလွဲပီး ဘယ်မှသွားတာ မဟုတ်ဘူး
ဆိုတော့ အူးလေးကဖုန်းကျော်ရယ် မြန်မာစကားက ဝါကျ ဆက်နိူင်သလောက် ရေးလို့ရနေတော့ ခင်ညားလုပ်မှ ဌာနတွေ ၃ခု၁ခုပေါင်းပီး ထပ်ချဲ့လာနေအုံးမယ်။
တချို့များဆို ဝန်ကြီးဌာန ခေါင်းစဉ်က လျှောက်လွှာစာရွက် ပြည့်တောင်နေပီ သိပ်လဲမကျပ်ပါနဲ့ ဆြာရယ်